Tag: fizotry ny fizotran'ny atiny | Martech Zone
Tag: fizotry ny fizotran'ny atiny
DivvyHQ: Drafitra avo lenta momba ny votoatiny sy ny fivezivezena
Asabotsy, Septambra 12, 2015 Douglas Karr
Raha miasa amin'ny orinasam-pandraharahana ianao, ny fandrindrana atiny sy ny fanatanterahana ny atiny dia ivon'ny tetikadinao amin'ny varotra ankapobeny. Ny fanamby dia ny fitantanana hevitra, enti-miasa, andraikitra ary famerenana ny satan'ny famokarana. Ny sehatr'i DivvyHQ dia manome ny fitaovana ilaina rehetra manomboka amin'ny filamatra ka hatramin'ny fanatanterahana. Ny sehatra dia natao ho an'ny famoahana atiny sy haino aman-jery sosialy. DivvyHQ dia fitaovana miasa mifototra amin'ny rahona, drafitra votoatiny ary famokarana fiasa famokarana natao hanampiana ireo mpivarotra sy mpamokatra atiny hahazo / mijanona ho voalamina ary mahomby amin'ny fanatanterahana fitakiana,